बिदेशबाट श्रीमान घर आउँदै गर्दा श्रीमती घर छो,डेर बे,पत्ता,कमाएको सबै स्वा,हा ! – Patrika Nepal
बिदेशबाट श्रीमान घर आउँदै गर्दा श्रीमती घर छो,डेर बे,पत्ता,कमाएको सबै स्वा,हा !
मंग्सिर २२, २०७८ बुधबार 69
बुटवलका लोक बहादुर वैदेशिक रोजगारिका लागि हिँड्ने गरेको करिव १७ वर्ष पुगिसकेको छ । घर आउने जाने गरेका उनी अहिले भने घर आउदाँ श्रीमती अर्कै सगँ हिडिसकेकी थिइन ।
आफू आउदैँ गरेको जानकारी पाए पछि उनको फोन लाग्न छो,डेको लोकबहादुरले बताए । सधै घर आउदा आफू श्रीमतिलाई जानकारी गराउने गरेको र यो पाली पनि आफुले जानकारी गराएर नै आएको उनले बताए । तर घर आइपुग्दा श्रीमती अर्कै केटासगँ हि,डिसकेको उनको भनाई छ ।
बुटवलको ॐसत्य ३ ठुटेपिपलका लोकबहादुर बिक अहिले भने करिव २५ महिना दुबै बसेर घर फर्किएका थिए । आफुले दुबैबाटै फोनमा आफ्नो टिकट भै सकेकोले आफु आउन लागेको बताए पछि श्रीमती त्यसै दिन माइत गएको आफुले पछि थाहा पाएको उनले बताए ।
कार्तिक १४ गते आइतबारदेखि श्रीमती ह,राएको उनले बताए । शनिबार माइतिबाट फर्किए पछि आफुसगँ फोनमा कुरा गर्दा आफुले सोमबार घर आइपुग्ने बताउँदा काठमाडौ नबस्नु घर आउनु सल्लाह गर्नु छ भनी कुरा भएको उनले बताए ।
श्रीमतिले सल्लाह छ भन्दै भने पछि आफू आइतबार बिहान नै घर आउन गाढी चढेको उनले बताए । आफू गाढी चढिसके पछि श्रीमतीसगँ कुरा गर्दा बस मा कि हायसमा आउनु भएको भनी सोधेको र आफुले हायसमा भनि जवाफ दिए पछि काटिएको फोन त्यसपछी नलागेको उनले बताए ।
आफू घरमा आईपुग्दा भने श्रीमती घर छो,डेर हिडिसकेको उनले बताएका छन । उनका १८ देखि २३ वर्षका दुई छोरा र एक छोरी छन । श्रीमती मालती बि क ३९ वर्षकि भएको उनले बताए ।
घरमा कुनै आर्थिक तथा अन्य त्यस्तो केही स,मस्या भएर हिडेको जस्तो आफुलाई नलाग्ने लोकबहादुरले बताए । आफुले प्रत्येक महिना श्रीमतिको खातामा पैसा पठाउने गरेको साथै छोराले पनि मासिक ३०/३५ हजार कमाएर दिने गरेकोले गर्दा पनि घरमा त्यस्तो दु:ख परेको हिडेको जस्तो आफुलाई नलाग्ने गरेको उनको भनाई छ ।
आफुले बुझे अनुसार एकजना पाल्पाको मुक्तबहादुर भन्ने केटाले कुबेत बाट फोन गर्ने गरेको र उसैसगं मालती गएको होकि भन्ने लागेको उनले बताए ।
गाउँतिर भने त्यही केटासगँको सम्बन्धको बारेमा कुरा भएको बुझेको उनले बताए । आफ्नो श्रीमान घर आउनु भन्दा अगाडि आफू काठमाडौ तिर बस्ने र कुबेतबाट फर्किए पछि उसैसित बिबाह गर्ने भनी गाउँतिर भनेको भन्ने आफुले सुनेको उनले बताए ।
छोराछोरीले पनि थाहा पाएर गा,ली गर्दा लुकि लुकि बोल्ने गरेको भन्ने आफुले सुनेको उनले बताए । आफुले कमाएको सम्पुर्ण उसैको नाममा भएको र अहिले हिड्दा एक लाख जतिको सुन र पैसा लिएर गएको उनले बताए ।
Prev१७ वर्षका किशोरले दिदीको हत्या गरे, छिनिएको टाउकोसँग आमा–छोराले खिचाए सेल्फी!
Nextक,ठै यी बुवाको ! शरिर भरीनै यस्तो बिजोग,आखिर के रो,ग आयो यस्तो ? (भिडियो सहित)
एक भि’डियो जस्ले भाग्य न्यौपानेलाई एकाएक प’तन बनायो ! यु ट्युबले गर्यो सदाको लागि बि’दाई ।
राेबटले पनि बच्चा जन्माउन सक्ने अमेरिकी वैज्ञानिकको दाबी